Sida loo labbisto qaabka - Dharka Ragga | Niman qurux badan
Alicia tomero | 15/11/2021 21:01 | Daryeelka shaqsiyeed, fashion, Isbeddellada
'Labbiska qaab-dhismeedka' waa hab loo labbisto taas way ka duwan tahay gudaha qof kasta. Waxay ka dhalataa shakhsiyaddiisa, qof ka dhigaya mid ka duwan oo gaar ah, laakiin nacasnimo. Hubaal waxaad ku heshiin doontaan inaan dhammaanteen haysanno qaabka labiskayaga, hadday sax tahay iyo haddii kaleba, mar haddii ay taas anaga na dhisto. qofnimo leh.
Kahor habkayaga labiska iyo in aan ku samayno qaabka waxaa jira dhowr talooyin kuwaas oo waa inaysan lumin in la saxo. Waxay qaadataa damiir ku samee Isticmaal wax kasta oo aad haysato, abuurista qaab oo had iyo jeer ku dara qayb gaar ah.
1 Qalabka lagu labbisto oo leh qaab
2 Siyaabaha loo labbisto oo leh qaab
3 Labbis da'yar oo qurux badan
3.1 Magaalooyinka, Surfer ama Skater Style
3.2 Qaabka Bohemian
4 Faahfaahinta labbiska oo leh qaab
Qalabka lagu labbisto oo leh qaab
Dhammaan faahfaahinta waa arrin. Labbisashadu maaha kaliya dhar, laakiin ahaansho ama qaado wax kasta oo kugu kaabaya in lagu sameeyo dabeecad. Muuqaalkaaga sidoo kale waa muhiim: haddii aad tahay qof xor ah, si sax ah ayaad u socotaa oo waxaad dareemeysaa xiriir wanaagsan, taas waxay calaamadin doontaa qaab wanaagsan.
Isgaarsiinta aan afka ahayn ayaa iyaduna keenta farqi. Waa in nadiif ahow, ur fiican, xidho timo si fiican loo dejiyey hana xidhin dhar aad u xidhan. Xataa habka aad u hadasho ayaa noqon doonta qodobka ugu muhiimsan ee lagu faah faahinayo oo lagu gaaro ujeedooyinka. Haddii aad rabto inaad ku guulaysato dhammaan faahfaahintaas, maaha arrin aad samaynayso iyada oo aan wax badan, laakiin waa dareento iyaga oo miyir qaba.
Labbiska qaab-dhismeedku ma yahay nin akhyaar ah mise xidhashada xarrago leh? Daacadnimo, waxay noqon kartaa isbeddel in la abuuro habkan. Xarrago leh waa hab labiska, kaas oo waxay calaamadisaa shakhsiyadda qofka, waxaana lagu dari karaa hab labbis oo gaar ah. Inaad noqoto qof dabacsan waa qayb ka mid ah sida loo dhaqmo oo loo labbisto si xarrago leh, laakiin dhisidda qiyamka qof kasta. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa inay tahay qof leh qaab, laakiin maaha habka ay u qeexayaan.
Siyaabaha loo labbisto oo leh qaab
Habka labiska ee qaabka waxaa lagu qeexay habka muuji shakhsiyadda qof kasta. Nin kastaa wuxuu leeyahay muuqaalkiisa gaarka ah, haddii uu ku sameeyo xidido weyn iyo abuurista soo jiidasho. Qaababka lebbiska waxay u dhaxayn karaan kuwa magaalada ugu badan ilaa kuwa caadiga ah ama kuwa isboortiga. Waxaa jira qaabab dhaqameed sida Rock, Punk, Hippie, Gothic kuwaas oo ah kuwa ugu daran laakiin lagu samayn karo shakhsiyad. Mise Cowboy-ka, Isboortiga, Magaalada, Hip Hop-ka ama qaab-dhismeedka-Calasiga ah.Waa kee kan ugu badan ee la xidhiidha shakhsiyaddaada?
Labbis da'yar oo qurux badan
Isbeddelka noocaan ah Waxa loo abuuray in loo xidho dhalinyarada. Si aad u sameysid qaabka waxaa muhiim ah in la ogaado in ay tahay in ay noqoto mid waafaqsan da'da. Si aad u ogaato sida si fiican loo labisto mid ka mid ah ayaad akhrin kartaa maqaaladeena halkaas oo aan kuu sheegayno sida ay tahay inaad u saxdo khaladaadkaas yaryar markaad iibsanayso dharka aad u baahan tahay.
Magaalooyinka, Surfer ama Skater Style
Inta badan waa qaababka aadka loo isticmaalo dhalinyarada. Habka magaalada ayaa lagu soo ururiyay dharkaas ay jecel yihiin inay la socdaan waqtiyadaas waddada iyo marmar. Si aad u abuurto dheelitiran uma baahnid inaad cilmi baaris badan sameyso, laakiin waxaan hubnaa in dhallinyaradu aad iyo aad u jecel yihiin. fududaanta dharka.
El qaabka skater waxa uu had iyo jeer ku suntanaa qaabka uu u xidho surwaal bac ah, shaarar ballaadhan iyo mid dheerba, in kasta oo aanay u ekayn, haddana halkaas ayuu ka bilaabay. 70-meeyadii'. Habkan labiska ah ayaa sidoo kale lagu daray habka labiska ee magaalada iyo halka qaabka grunge iyo hipster ay sidoo kale la socdaan.
El style surfer Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa sida aadka ah u soo jiitay daadinta dharkeeda qaabaysan, waxay abuurtaa wax badan oo cusub iyo hufnaan wakhtiga labiska. Waxaan jecelnahay kuwa qallafsan, cambarka la iftiimiyay iyo habka Hawaay ee loo xidho dharka. Waa hab kale oo loo abuuro isbeddel, gaar ahaan magaalooyinka u dhow xeebta.
Had iyo jeer waxay abuurtay isbeddel, tan iyo dharkeedu waxay ku habboon yihiin qaab nololeed deggan oo nasasho leh. Waxay soo bandhigtaa qurxinta aan caadiga ahayn, midabyo aan caadi ahayn, iyo ka soo jeeda qowmiyadda ama hippie. Way ku habboon tahay in la xidho maalin kasta, in kasta oo qaar badani door bidaan in ay ku daraan dibad-baxyada toddobaadka.
Faahfaahinta labbiska oo leh qaab
Waxaan falanqeyneynaa talooyinka yar yar ee kaa caawin doona inaad abuurto qaabkaaga shakhsi ahaaneed. Waa in falanqee jidhkaaga si aad u ogaato nooca dharka kugu habboon, talo ahaan way fiicantahay dooro dharka oo isku day shakhsi ahaan. Isku day inaad qorsheyso qaab u eg habkaaga iyo jilitaankaaga, ma noqon kartid mid wax ku ool ah oo aad jeceshahay bohemian-ka.
Ka fikir iibso dhar fudud, laakiin taasi waxay calaamad u tahay wax ka duwan, oo la isticmaali karo dhowr sano. Had iyo jeer waa inaad daryeeshaa dharkaaga iyo taasi uma eka mid aad u xidhan. Marka ay timaado in la isku daro dharka, waa in aad samayso doorasho leh dhadhan. Qalabka wax lagu dhejiyo waa wax badan, markaa waa inay ahaadaan kuwo aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo labbisto qaabka